Ho an'ny manetry tena
"Koa amin'izany manetre tena ambanin'ny tàna¬maherin’Andriainanitra, mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro" - 1 Pet. 5 :6
Ny hoe mitafy fanetren-tena dia tsy midika fa ambany ny faha¬lalantsika ara-tsaina, tsy manana tanjona, malemy eo amin'ny fiai-nana, mitondra enta-mavesatra izay toa mila tsy ho zakantsika. Ny tena fanetren-tena marina dia manatanteraka ny sitrapon'An¬driamanitra amin'ny fiankinana amin'ny heriny.
Miasa amin'ny alalan'ireo izay ankasitrahany Andriamanitra. Matetika izy no mifidy ireo mane¬try tena indrindra ho fitaovana hanao asa lehibe indrindra, satria ny heriny dia tanterahina ao amin'ny fahalemen'ny olombelona. Manana ny mari-pandrefesantsika isika, ary amin'ny alalan'izany no andrefesantsika ny fahalebiazana sy ny fahakelezan'ny zavatra iray; kanefa Andriamanitra tsy mandre¬fy araka ny fenitra apetratsika. Tsy tokony hihevitra isika fa izay zava¬dehibe amintsika dia tsy maintsy zava-dehibe amin'Andriamanitra, na izay kely amintsika dia maintsy kely Aminy.
Tsy ilaina avokoa ny firehare¬hana fitadiavam-pahamendreha¬na ao anatintsika (...) ny valisoa dia tsy avy amin'ny asa fa fahaso¬avana, fandrao hisy hirehareha.
Tsy misy fivavahana ao amin'ny fanamboniana ny tena. Tsy haha¬zo anjara amin'izany fahasoavana izay hany afaka hahatonga azy hahomby ao amin'ny asan'i kristy ireo izay mametraka ny fanan¬dratan-tena ho tanjona. Na oviana na oviana no misy ny fireharehana sy fahatokian-tena dia simba ny asa (...)
Ny Kristianina izay toy izany eo amin'ny fiainany manokana, manolo-tena isan'andro, matotra ara-tanjona sy madio saina, manetry tena manoloana fihan¬tsiana, mino sy miorina tsara, mahatoky hatramin'ny kely indrindra, olona izay maneho ny toetran'i Kristy eo amin'ny fiainany ao an-tokantrano, ny olona toy izany dia sarobidy eo imason' Andriamanitra mihoatra noho ireo omen'izao tontolo izao anarana hoc misiônera na maritiora (...)
Tsy ny fianarantsika, tsy ny toerana misy antsika, tsy ny isan'ny talenta nomena antsika, tsy ny fanirian'ny olona, no ahitana ny tsiambaratelon'nyfahombiazana. Ny fahatsapantsika ny tsy fahombiazantsika no hiban¬jinantsika an'i kristy, ary amin'ny alalany ilay hery ambonin'ny hery rehetra, saina ambonin'ny saina rehetra, ny faniriana sy fanka¬toavana dia hahazo fandresena hatrany hatrany (...) Masina ny valisoa sy fahasoavana ho an'ireo izay niasa ho an'Andriamanitra tamim-pinoana tsotra sy fitiavana.